Waa Maxey Faaiidada ku jirta Heyadda Cilmi Baadhista Beeraha? | Xeegonews.com
Machadka ama Heyadda cilmi baadhista beeruhu, waxa weeye heyadda u qaabilsan wadan kasta in lagu xaliyo mushkiladaha beeralleyda; wadan kasta la soo derista. Cilmi baadhis la’aan ma kobcin kartid ama ma kordhin kartid haddii aanad laheyn goob mashaakilka beeraleydda lagu xaliyo laguna ihktiraco habab cusub oo wax soosaarka lagu kordhin karo. Haddaba, Ujeedooyinka ugu waa weyn ee laga leeyahey xarun cilmi baadhista beeraha waxaa ka mid ah ujeedooyinka hoos ku qoran:
In ay abuurto dalagayo ka wax soosaar badan dalagyadda hadda beeraleydu beertaan
In ay si isdaba joog ah ay u qabato tababaro la xidhiidha aqoonta beeraha kana qeyb qaadato wac yi galinta beeraleyda.
Dhinaca kale Xarunta cilmi baadhista Beeraha ee Aburin waa dugsi tababareed oo ardeyda laga soo xulo wasaaradda beeraha iyo jaamacadaha kala duwan ee dalka lagu siiyo shahaado sare oo culuunta beeraha ah si ay uga qeyb qaadato kaalinteeda ku aadan tayeynta xirfadlayaasha beeraha.
Haddaba waxaa nasiib darro ah in wasaaradda beeruhu ayna laheyn Waax masuul ka ah cilmi baadhista beeraha; balse heyaddani hadda ay tahey mid qeyb ka ah mashruuc ay maallgaliso SDF oo hadda sii dhamaanaya.
Hadaba wasiirka cusub ee wasaaradda beeruhu isagoo oo ta ka duulaya, ayuu isugu yeedhey Khubaradda ama aqoonyahanadda beeraha ee soomaaliland si ay u falan qeeyaan am aula guraan waxyaabaha inaga hortaagan in aan wax beerano. Haddaba qodobaddii ugu doorka roonaa ee shirkaas lagu sooqaatey waxa ugu waaweynaa:
In Heyadda cilmi baadhista beeruha ee hadda jirta mustaweheeda kor loo qaado, lana tayeeyo haddii ay noqon laheyd mid maamul iyo agab ba; si hadafkii laga lahaa hey’adaas cilmi baadhista beeraha looga midho
In qadar lacag ah loogu daro miisaaniyadda si loogu kabo ama dhaqaajiyo hey’addaas taas oo aan fileyno in ay wax weyn ka tari doonto wax soosarka dalkeena haddii ay noqon laheyd aqoon kordhin iyo cilmi baadhisba.
Waxa runtii wax lagu farxo ah in xarunta Cilmi baadhista beeraha ee Aburiin ay qabatey arrimodhawr ah oo wax ku ool ah muddaddii sanadka iiyo badhka aheyd ee ay jirtey. Waxaan doonayaa in aan halkan ku xuso bal wixii ay qaatey mudadaas kooan ee ay jirety.:
Waxey seynis yahanadda xarunta cilmi baadhista ee abuuriin keeneen wadanka digirro kala duwan oo ay ka soo qaadeen dalka Ethiopia ee aan dariska nahey; waxeyna ku tijaabiyeen xarunta abuuriin iyaga oo is bar bar dhig ku sameeyey teena iyo kuwa laga keeney Ethiopia, waxeyna ogaadeen in digiraha laga keeney Ethiopia oo ahaa afar nooc ay ka wax soo saar badan yahiin kuwa maxaliga ah in kabadan laban laab, halka digiraha qaarkoodna ayba ka badnaayeen teena sadex lab, qaar kalena toban lab.
Taasi waxey kuu cadeynayeysaa in uu wadan kani u baahan yahey cilmi baadhis beered; tani waxey kaloo daliil u tahey in aan wax soo saarkeena aan ku kordhin karo cilmi baadhis. Waxaa xaruntan u qorsheysan in digiraha noocan oo kale ah ee laga keeney Ethiopia la badiyo dabadeeedna abuurkooda la gaadhsiiyo beeraleyda, si beeraleydu uga faaiideysato.
Waxaa digirtan si aada looga isticmaalaa wadamadda Hindiya, Pakistan.Ethiopia, kenya iyo qaar kale oo badan. Ka sokow cuna ahaan. Wax yaabaha kale ee aan ku aragney waxaa ka mid ahaa adkeysi xad dhaaf ah in ay u leedahey abaaraha, biyo la aanta iyo xitaa waxaan ogaaney in ay ka adkeysi badan tahey hadhuudhadda aan beerano. Oo aad garan kartaan xadiga adkeysi e ay leeyihiin.
Dhinaca kale digirtani (Pigeon pea) wey ka barootiin badan tahey hadhuudhka iyo galleydaba. Marka laga eego xaga cimriga. Digirtani (Pigeon pea) wuxay jiri kartaa ilaa iyo shan sana dood; waxeyna bilaabeysaa in ay dhasho marka ay gaadho shan billood. Waxey u dhigan taa uun geed kuugu yaala guriga dhexdiis oo aad beeraneysid.
Waxaa loo baahan yahey in dhamaan digirahaas aan ka hadleyney , abuurkooda beeraleyda la gaadhsiiyo si beeraleydu uga faaiideystaan cunnadana loo sugo.
Waxaan tijaabiney tusneyna beeraleyda deegaanka in roobka caadiga ah ee aan helo aan ku beeran karro; Laws, Sisin, Digiraha iyo waliba caws tayadiisu sareyso oo ay xooluhuna cuni karaan abaaraha soo noqnoqonayana adkeysi u leh lagagabixi karo.
Waxaa noo qorsheysan in aan hawlahaas cilmi baadhista aan halkaas ka siii wadno ; si beeraleydeenu ay uga midha dhaliyaan wax soo saarka beeraha.
Waxaa iyaduna xusid mudan in aan wadanka soo gailney geedka qaafka oo ah geed aad u qiima badan oo luqada carabiga lagu yidhaahdo Qaaf. Geedkani waa geed si dabiici ah uga baxa imaaraadka Carabta, isla markaana waxa uu geedkani yahey had yadda ugu qaalisan eee boqorka imaaraadka Carabtu siiyo wadanadda kale ee caalamka ee ay ku jiraan xitaa wadamadda khaliijku.
Geedkaasi oo dhawaan na soo gaadhey waxaa noo qorsheysan in aan si tijaabo ah bal marka ugu hoireysa uga beerno Xarunta cilmi baadhista Aburin iyo waliba xarunta wasaaradda beeraha si aan u ogaano bal inuu ka baxayo wadankeena iyo inkale.
Dhinaca kale wuxuu inaga caawinayaa ka hortagaa nabaad guurka , maxaa yeeley wuxuu ka bixi karaa caraddiisu bacaadka they ee aaney geeedaha kale ka bixi Karin. Waxaan ka beeri karaa magaalooyinka si aan uga helo Hadh; caleentiisana waxey calaf ama cunno u noqoneysaa xoolaha magaalooyinka lagu dhaqdo sida riyaha iyo wixii la mid ah.
Hadaba waxaan u soo jeeedin lahaaa xukuumadda uu madaxweyne Muusa Bihi madaxweynaha ka yahey in Heyadda cilmi baadhista beeruha ee aburiin eek a shaqeynaya wax soo saarka dalka in loo qoondeeyo miisaaniyad lagu wadi karo hawlaha ay qaranka u hayso ee ay ka mid ka tahey siddii wax soo saarka dalkeena kor loogi qaadi lahaa.
Xubin Xarunta Cilmi Beeruha ee Abuuriin